ALAKAMISY 14 JANOARY 2021
LOHOLONA : « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe
Manitsaka ny herinandro faharoa hidirana amin’ny fampielezan-kevitra ireo kandida ho Loholon’i Madagasikara. 24 novembre 2020
Miavaka tsy tahaka ny an’ireo fifidianana efa tanteraka teo aloha ny fiatrehana izany. Ireo mpifidy vaventy no mandray anjara, izany hoe, ireo Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina. Tsy misy ny famoriam-bahoaka eny an-kalamanjana fa avy hatrany dia vitan’ny fifandresen-dahatra mivantana sy eo an-databatra boribory no atao. Famoriana an’ireo Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina amina toerana iray mba hahafahana mamariparitra amin’izy ireo ny lahasa izay imasoan’ilay kandida aorian’ny fahalaniany.
Manoloana izany indrindra dia ahiana, hoy ny teo anivon’ny Kmf/Cnoe, ny mety hisian’ny kolikoly noho io paikadin’ny fampielezan-kevitra misy io. “ Ahiana ny hisian’ ny kolikoly satria tany amin’ ny vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra aza dia mety efa nitranga ny kolikoly ”, hoy ny nambaran’ny filohany, Andoniaina Andriamalazaray. Ilaina, hoy izy, ny fandraisan’andraikitra mafonja avy amin’ireo kandida manoloana izany trangan-javatra izany. Fanontaniana napetrany ny hoe : “ ho sahy ve ary mendrika ny maha olom-boafidy ireo mpifidy vaventy ve izay kolikoly izay ? Hijoro hanohitra izany ve izy ireo ? Ary hijoro hitory mihitsy ny olona manao kolikoly ? Hanana izay fahasahiana izay ve izy ireo ? ” Ankoatra izay, nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fizotry ny Fampielezan-kevitra Loholona ny avy Kmf/Cnone. Nambarany fa manara-dalàna izany ary araka ny tokony ho izy.
“ Araka ny tokony ho izy ny Fampielezan-kevitra amin’ izao fotoana. Tsy hahita praopagandy mitabataba be mihitsy isika satria ny Fampielezan-kevita tokony hitranga amin’ ny maha fifidianana Loholona azy, dia tsy manakoako satria tsy natokana ho an’ ny vahoaka ny resaka fa natokana ho an’ ny olom-boafidy : Ben’ ny tanàna sy mpanolotsaina.
Rariny raha tsy misy ny tabataba. Rariny raha fivoriana any anaty efitrano no betsaka”. Nohamafisiny fa hatramin’izay dia tahaka izany hatrany ny endriky ny fampielezan-kevitry ny fifidianana Loholona. “ Tsy hisy fiovana mihitsy izany satria ilay fitsipika hoentintsika mifehy ny fifidianana Loholona no maniraka antsika hiaina lafin-javatra toy izao”, hoy izy. Tsy tokony hatao mahataitra kosa, araka ny heviny, raha maro an’ isa ny antokom-politika eo anivon’ ny Fanjakana amin’ izao fotoana.
Olona fito nalefa eny Tsiafahy, vehivavy iray notazomina eny Antanimora FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (1174) 11 janvier 2021 Mety hiafara amin’ny fanenjehana lehilahy iray any Mayotte FANDRANGITANA ADIM-POKO (121) 11 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (113) 13 janvier 2021 Polisy nandeha môtô maty nohitsahin’ny kamiao LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TENY MAHAZO (80) 11 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (76) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (73) 13 janvier 2021